Cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Somalia oo muddo sanad ah lagu kordhiyey… – Hagaag.com
Cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Somalia oo muddo sanad ah lagu kordhiyey…
Posted on 16 Nofeembar 2019 by Admin in National // 0 Comments
Golaha Amaanka Qaramada Midoobey ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada New York waxaa dood adag ka yeesheen qaraar ay soo gudbisay dowladda Britain oo la xiriira cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Golaha ayaa dood dheer kadib ugu danbeyntii isku raacay in muddo sanad ah lagu kordhiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale Goluhu mamnuucay in dalka Soomaaliya loo dhoofiyo wax-yaabaha Kiimikada ah taasoo ay sheegeen in loo adeegsado farsameynta walxaha qaraxa oo ay inta badan adeegsadaan Ururada dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya.
Laakiin marka dhinaca kale la eego waxaa codeynta qaraarkan ka aamusay oo aan u codeyn dalalka Ruushka, Shiinaha iyo dalka Equatorial Guinea, iyaga oo ku tilmaamay in qaraarkan uu qeyb ka yihiin wax-yaabo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha.
Ugu danbeyntii Golaha ayaa cambaareeyay hubka iyo rasaasta sharci darada ee loo dhoofiyo Soomaaliya ee xadgudubka ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.